3 Axis လူပျိုဟော်ကီ Brush ပြုလုပ်ခြင်းစက် | MEIXIN
ဝင်ရိုး ၅ ခုနှင့်တစ်လုံးတည်းသောတံပိုးခတ်စက်
၄ Axis Toilet Brush Tufting စက်
၃ Axis Hockey Brush Making Machine
ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသည် ၀ င်ရိုးနှစ်ဆမှ ၅ လုံးအထိ (နှစ်ဆ) ထုတ်လုပ်ရန်အထူးပြုသည်စက်စက်, CNC tufting စက်, CNC tufting နှင့်တူးစက်, CNC ကတူးနှင့် tufting ပေါင်းစပ်စက်, နန်းကြိုးအမျှင်လေးများကိုချုံ့စက်, နန်းကြိုးအမျှင်လေးများ ဖြတ်ထုတ်စက်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကိုအဓိကအားဖြင့်စုတ်တံအမျိုးမျိုးတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုကြသည်။ ဥပမာ - တံမြက်စည်း (ပလပ်စတစ်နှင့်သစ်သား) သန့်ရှင်းရေးတံ၊ လျှပ်စစ်သွားတိုက်တံ၊ ခရီးသွားသွားတိုက်တံ၊ အလှကုန်ပစ္စည်း၊ လက်သည်းအရောင်ဖြီး၊ စက်မှုလုပ်ငန်း roller brush၊ , ပန်းကန်ဆေးကြောဖြီး, ဖြီး, သစ်သားဖြီးနှင့်။
၁။ FMX လ်တာတပ်ဆင်ခြင်းသည်အသစ်စက်စက်ဖြီးထားသောသစ်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်လျင်မြန်စွာပြောင်းလဲနိုင်သည်။2grippers နှင့်အတူဒီစက်။
၂။ အမှီအခိုကင်းသော3aix motion၊ ပလပ်စတစ် hokey brush အတွက် tufting ကိုသုံးသည်။
tufting.easy ၏ဒီဇိုင်းအသစ်နှင့်အတူ 3.this စက်လည်ပတ်။
4.high မြန်နှုန်း, 2000 pcs / 10 နာရီပတ်ပတ်လည်အလုပ်လုပ်။
စက်ထဲတွင်မော်တာ၏ A / အမှတ်တံဆိပ်
1.Delta အင်ဗာတာ, Panasonic servo မော်တာ။
2.Taiwan TBI ဘောလုံးဝက်အူလမ်းညွှန်လမ်းနှင့်ထိုင်ဝမ်ဟိုင်း။
ဝံနှင့်အတူ 4.JAPAN ။
5.GERMEN SENLIMA ဘရိတ်မော်တာ။
6.SHENZHEN ATECH Controller ။
B / Controller ၏အင်္ဂါရပ်များ
1. ယင်း၏လက်စွဲ data တွေကို input ကိုနှင့်အတူဒေတာ input ကိုနည်းလမ်းသင်ပေးနှင့်အတူပေး။
3. အမြန်နှုန်း tufting အမျိုးမျိုးသောမြန်နှုန်းညှိနှိုင်းမှုများအတွက်အင်ဗာတာကထိန်းချုပ်ထားသည်။
စနစ်များမှန်မှန်ကန်ကန်လျှင်စက်ကိုစမ်းသပ်ရန် 4. စမ်းသပ်မှု mode ကို။
6. ပုံမှန်အလုပ်လုပ်သို့မဟုတ် positioning ကိုစမ်းသပ်ခြင်း။
၇ ။ အလွန်အကျွံဖိအားနှိုးဆော်သံ tufting ။